လောလောဆယ်တော့ ကျနော်တို့ဆီမှာ MG လို့ခေါ်တဲ့ MORRIS GARRAGES ရဲ့ product တွေထဲက ၃ မျိုးရရှိနိုင်ပါတယ်။ ZS, RX5 နဲ့ HS တို့ပါ။ အဲဒီအထဲမှာ Brand New MG HS Trophy grade ကတော့ feature ပိုင်းအရ အစုံဆုံး၊ quality ပိုင်းအရ အကောင်းဆုံးနဲ့ ဈေးနှုန်းအရလည်း အမြင့်ဆုံးပါပဲ။ ကားတန်ဖိုးသီးသန့်ကို ၆၀၂ သိန်းပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။
ဒီ MG HS ဟာ Compact Crossover SUV အမျိုးအစား ကားတစ်စီးဖြစ်ပြီးတော့ ဆုတွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်း EURO NCAP 2019 –5Star ရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ထိုင်ခုံတွေက Premium Leather အစစ်တွေ၊ နာမည်ကြီး တံဆိပ် Bather Leather တွေလို့ MG ကဆိုထားတယ်။​ ချုပ်ရိုးချုပ်သား အသေးစိပ်ကျကျ သပ်ရပ်တယ် ၊ နုညံ့တယ်၊ luxury feeling မျိုးရတယ်။ ကားကို ကိုယ်ရွေးချယ်မောင်းနှင်တဲ့ Driving Mode အမျိုးမျိုးကို မူတည်ပြီး လိုက်ပါပြောင်းလဲတဲ့ Surrounded by Ambient Light တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့လေ။ Seat adjustments တွေက Auto electric motor adjustment နဲ့ပါ။
ကျန်တဲ့ ကားအတွင်းခန်းတွေ ၊ တံခါးဘောင်အပေါ်ပိုင်းတွေ၊ dashboard တွေ အားလုံးနီးပါးမှာလည်း soft touch တွေဖြစ်အောင် လုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်။ ဒါ့အပြင် ကားအတွင်းခန်းအနှံံ့ အရည်အသွေးမြင့် Air Bag ၆ လုံး ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပေးထားသလို ယာဉ်မတော်တဆမှု ကြုံလာရင် အထောက်အကူပြုပေးမယ့် Auto Unlocking During Collision, Collapsible Steering Column, Active Safety Headrest, ISOFIX Car Seat Anchors, Pretension Seatbelts တွေကို တပ်ဆင် ထားတာကြောင့်လည်း ကားချစ်သူတို့ကို လုံခြုံစိတ်ချမှုအပြည့်ရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ကလေးနှိုးကြည့်ကြရအောင်။
ဒုတိယအချက်က 12.3-inch အရွယ်အစား Digital Driver Display ပါ။ ခေတ်မီတယ်။ ကြည်လင်တယ်။ ရှင်းလင်းတယ်။ သူက Driving mode အပေါ်မူတည်ပြီး theme တွေလည်းပြောင်းလို့ရတော့ လိုသလိုပြောင်းပြီးမောင်းတဲ့ modes တွေအတွက် ပိုပြီးအားကောင်းတဲ့ feeling မျိုးကို ရနိုင်တာပေါ့။
D Shape steering မှာသုံးထားတဲ့ leather သားလေးကိုလည်းသဘောကျတယ်။ Mounted control တွေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်။ အကြိုက်ဆုံးအချက်က sporty style ပုံမှန်ထက် နည်းနည်းပိုသေးတဲ့ steering မှာမှ paddle shifters တွေပါတာပါပဲ။ လုံးဝကို fully sporty feeling ရနိုင်တဲ့ steering area လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
တတိယအချက်ကတော့ 10.1-inch touchscreen infotainment ပါ။​ Entertainment အပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း Virtual cluster မှာဆိုရင်လည်း 12.3 super-size,4display theme နဲ့ integrated vehicle status တွေကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Center Console က ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီး Infotainment touch screen ဟာ ဆိုရင်လည်း 10.1" size touch screen ဖြစ်တဲ့အတွက် wide view နဲ့ ရှင်းလင်းစွာ မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Apple CarPlay and Android Auto စနစ်တွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိူင်ပါတယ်။
Infotainment resolution ကကောင်းတယ်။ Back camera မျဉ်းကွေးတွေပါပြီး MG ထုံးစံအတိုင်း နောက်မှာရှိတဲ့ obstacles နဲ့ အကွာအဝေးကို cm နဲ့ပြပေးတာလေးကလည်း သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်။ ပိုပြီးတိတိကျကျ မှန်းလို့ရတာပေါ့နော်။
စတုတ္ထအနေနဲ့ကတော့ Air Purifier ပါ။ သူက ဒီ Center console box ထဲမှာပါတာပါ။ ကားအတွင်းမှာရှိတဲ့ လေကို သန့်စင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တော့ အခုလိုမျိုးကာလမှာ စိတ်သန့်သွားဖို့အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ feature တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့အချက်က Air Purifier ကို infotainment ကနေလည်း control လုပ်လို့ရတာပါပဲ။
Gear Knob မှာ MG Logo ပါတာလေးကိုလည်း သဘောကျတယ်။ Air con တွေဘာတွေကို control လုပ်ဖို့အတွက် Physical button လေးတွေ ပါတာကိုလည်း သဘောကျတယ်။ MG HS မှာ air conditioning system က Automatic Dual Zone အပြင် round air-con ဖြစ်သွားပါပြီ။ ရှေ့အတွက်လည်းရသလို..
…နောက်မှာလည်းရပါတယ်။ Sporty, Luxury, Athletic, Spacious ဖြစ်အောင်ကို အသေးစိပ် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက် ဖန်တီးပေးထားတဲ့ ကားအတွင်းခန်းဒီဇိုင်းနဲ့ နောက်ထိုင်ခုံတွေကလည်း headroom legroom ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှိတယ်။ ZS လိုမျိုးပဲ​ အလွယ်တူ အဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်ပြီး သိပ်ကြီးတဲ့ panoramic sunroof ကြီးလည်း ပါတဲ့ အတွက် ခရီးထွက်တဲ့အခါတွေမှာ ကားအမိုးဖွင့် မောင်းနှင်ချင်တဲ့အခါ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လေကောင်းလေသန့်ကို အပြည့်အဝ ခံစားနိုင်ပါတယ်။ ZS တို့ RX5 တို့လိုမျိုး သိပ်ကောင်းတဲ့အသံထွက်နဲ့ speaker ၆ လုံးလည်းပါတယ်။ 12-volt socket နဲ့ USB ရှေ့နောက် ၄ ပေါက်လည်းပါတယ်။ အကြိုက်ဆုံးအချက်ကတော့ နောက်ခုံတွေကို adjust နည်းနည်း လုပ်လို့ပါရသေးတယ်ဆိုတော့... ဘာလိုသေးလဲလို့ပြောရမလိုပါဘဲ။
ကားနောက်ပိုင်းမှာတော့ အားလုံးတွေ့ရတဲ့အတိုင်း grade အပြည့် LED Taillight ဖြစ်ပါတယ်။ ကားနောက်ဖုံးပေါ်က လေပင့်အားထိန်းတောင်ပံ Shark Fin Antenna တွေပါတယ်။ Rear Diffuser မှာလည်း Chromium Bumper ပါရှိနေသလို အဝိုင်းပုံ အိပ်ဇောတစ်ခုစီကို ဘယ်/ညာ တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Limited Edition ဖြစ်တဲ့ Trophy grade အတွက် Trophy Logo ကိုလည်း သေသပ်စွာ တပ်ဆင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ကားနောက်ဖုံးက Boot door ကလည်း လက်နဲ့ဖွင့်စရာမလိုတဲ့ Electric Liftgate ဖြစ်ပြီး electric motor နဲ့ဆိုတော့ ဖွင့်ရပိတ်ရ လူသက်သာတာပေါ့နော်။
ပုံမှန်အတိုင်းဆို 463 L ဝင်ဆံ့မှုရှိတယ်။ နောက်ခုံတန်းကို ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ 1,287 L အထိ ဝင်ဆံ့မှုပမာဏတိုးသွားမှာပါ။
၁၅ ပေရှည်၊ ၆ ပေကျော်ကျယ်ပြီး ၅ ပေခွဲမြင့်တဲ့ ဒီ MG HS အတွက်တော်တော်လေးများတဲ့ပမာဏလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
Wheelbase ကတော့ ၈ ပေကျော်ပြီး ground clearance ကတော့ ၇ လက်မနီးပါးရှိပါတယ်။ ဒါကအခုမြင်နေရတဲ့ 18-inch alloy ခွေနဲ့ဆိုရင် ရနိုင်တဲ့အမြင့်ပါ။
Advanced High Strength Steel 70% နဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ Body သံသားပိုင်းကလည်း တော်တော်လေးထူတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့...
ကျနော်တို့အတူတူ ရှေ့ပိုင်းရုပ်ထွက်လေးကို သွားကြည့်ကြရအောင်လား။
MG HS exterior နဲ့ပတ်သက်ပြီး spots look ဖြစ်တာ၊ aerodynamics ပိုင်းကောင်းတာ၊​ grille လှတာတွေ၊ သဘောကျစရာကောင်းတဲ့ Logo design ပိုင်းတွေ စတဲ့ အားလုံးကြိုက်ကြပြီးသားတွေကထားလိုက်၊ အကြိုက်ဆုံးအချက်က မီးတွေပဲဗျ။ LED Turning Signal နဲ့ စတိုင်ကျလှပနေတဲ့ ရှေ့မီးကြီးက မီးအလင်းအားကောင်းတဲ့ LED Hazzard Daytime Running Lights ဖြစ်ပြီး Crystal မီးသီးအသေး ၉လုံးကိုပါ ထပ်မံပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်း ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ အရှေ့မီးကြီးရဲ့အောက်ဖက်မှာ အလင်းရောင်စူးရှတဲ့ နှင်းခွဲမီးသီးတစ်လုံးစီကို လေစုပ်ပေါက်တွေနဲ့ တစ်ဆက်တည်းတွဲစပ်ပေးထားလို့ အရှေ့ပိုင်းရုပ်ထွက်က အလွန်ကို တည်ငြိမ် စတိုင်ကျ ခန့်ညားလွန်းနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရှေ့/နောက် မီးတွေကိုလည်း Snake light LED မီးတွေကို တပ်ဆင် အသုံးပြုထားတဲ့ အတွက် Lightingနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတော့်ကို ပြည့်စုံကားတစ်စီးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Fog light ကလွဲရင် Projector headlight ၊ Day time running light ၊ Indicator အားလုံးက LED တွေချည်းပဲ။ Indicator ဆိုရင် သွားမယ့်ဘက်ကို ထိုးထိုးပြသလိုမျိုး ပြေးနေတာကလေးကလည်း သဘောကျစရာဗျ။ ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ မအောင့်နိုင်တော့ဘူး။
Test drive လုပ်ချင်လာပြီ။ ကျနော်နဲ့ လိုက်ခဲ့ပေးကြပါဦးဗျ။
ဒီကား အင်ဂျင်က 2.0 L turbo ဓါတ်ဆီအင်ဂျင်။ Maximum power 288 Hp နဲ့ Maximum torque က 360 Nm အထိရတယ်။​ Horse Power ကလည်း 228 hp အထိကို 5,600 rpm ရောက်ရှိပြီး ၊ အရုန်းအတက်ဆွဲအားဆိုရင်လည်း 360 Nm ကို 2,500 rpm - 4,000 rpm ကြားရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် off-road မောင်းမယ်ဆိုရင်လည်း စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝ ရနေစေမှာပါဖြစ်ပါတယ်။ .
Top Speed ဆိုရင်လည်း (Twin-clutch Spintronic Transmission) TST,6Speed Gear ဖြင့် တစ်နာရီ 210 km အထိမောင်းနှင်လို့ရတဲ့အတွက် ကား မြန်မြန်မောင်းတတ်သူတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Crossover SUV တစီးအနေနဲ့ အဆွဲအရုန်းက ကောင်းတဲ့ဘက်မှာရှိတယ်။​
ဆီစားနှုန်းက 34 mpg 14 kmpl လောက်ရမယ်လို့ MG ကဆိုထားတယ်။​ လက်ရှိပြနေတာကတော့ (ရိုက်ပြရန်) လောက်အထိ တွေ့ရပါတယ်။ RON 92 and above ကြိုက်ရာထည့် လို့ရတဲ့အတွက် နီးစပ်ရာ ဆီဆိုင်တိုင်းမှာ အလွယ်တကူ ဖြည့်လို့ ရတာလည်း မကြာခဏ ခရီးသွားရတတ်တဲ့သူတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့ စိတ်ချမ်းသာစေမယ့် တစ်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ . .
ခုမောင်းကြည့်ရသလောက်တော့ pillar တွေကြောင့် blind spot ဖြစ်နိုင်ချေနည်းတယ်။ Steering ကပေါ့တယ်။ Paddle shifters တွေနဲ့ကစားပြီးမောင်းရတာလည်း ပျော်စရာကောင်းတယ်ဗျ။ နောက်တချက်က 6-speed automatic transmission ကလည်း gear အကူးအပြောင်းညက်ညက်လေး။ အရမ်းမိုက်တယ်။
Suspension အပိုင်းမှာတော့ ဒီဘက်ခေတ် ကားတော်တော်များများလို့ပဲ ရှေ့ MacPherson နောက် Multi-link ကိုသုံးထားတော့ ကားမောင်းသူတို့ မကြာခဏ ကြုံရတတ်တဲ့ ပျက်စီးနေတဲ့ လမ်းတွေရဲ့ ကျင်းချိုင့်အကျတွေ၊ အချိုးအကွေ့တွေမှာ ကားကို တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းညှိထားနိုင်ပြီး ဘယ်လိုလမ်းမျိုးမဆို သက်တောင့်သက်သာ မောင်းနှင်နိုင်တာကြောင့် ကားပေါ်လိုက်ပါသူများအတွက် သက်တောင့်သက်သာရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ .
So.. so ပါပဲ။
ကျနော် review လုပ်ကြည်ရသလောက်တော့ MG ကားတွေက safety ပိုင်းကောင်းတယ်။​ အခု ဒီ HS မှာဆိုရင် Airbags တွေက စုစုပေါင်း ၆ လုံး။ ဒါ့အပြင် ABS ၊ EDB ၊ HAC ၊ HDC ၊ Cruise Control ၊ Blind spot sensor, Parking Sensor ကြိုက်တာရွတ်အကုန်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် AWD တစီးဖြစ်တာနဲ့အညီ XDS လို့ခေါ်တဲ့ Advanced Electronic Differential Lock စနစ်ပါတယ်။
AWD ဖြစ်တာကိုကြိုက်တာ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ SUV ပဲဖြစ်ဖြစ် Crossover SUV ပဲဖြစ်ဖြစ် AWD တော့ဖြစ်ကိုဖြစ်သင့်နေပါပြီ။
ပိုမိုက်တာက Driving modes တွေပဲ။ Eco, normal, sport, super sport ၄ မျိုးအပြင် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ချိန်ထားနိုင်တဲ့ mode တစ်ခုနဲ့ဆိုတော့ စုစုပေါင်း ၅ မျိုးအထိ ပြောင်းမောင်းလို့ရတယ်။ အဲဒီပိုမိုက်တာထက် ပိုမိုက်တာရှိသေးတယ်။
အဲဒါက ဒီခလုတ်လေးပဲဗျ။ (ရိုက်ပြရန်)
Super Sport mode ကို ဒီခလုတ်ကလေးနှိပ်ပြီးတခါတည်း Sport Mode ကို ပစ်မောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့
Super Sport Mode နဲ့ 0-100 လေးကို ရှုစားပေးကြပါဦးဗျ။
အားလုံးအပြီး summary ပြန်ကောက်ရရင်တော့ ဒီ ၆၀၂ သိန်းတန် MG HS 2020 လေးက
Exterior ရော Interior မှာပါ high quality materials တွေသုံးထားတယ်၊ luxury feeling မျိုးရတယ်။
Driving ပိုင်းမှာလည်း normal driving ပိုင်းသာမက driving mode ပေါင်းစုံပြောင်းမောင်းလို့ရပြီး ၊ Super Sport Mode နဲ့ပါ sporty ဆန်ဆန်နဲ့ သွက်သွက်လေးမောင်းတဲ့အခါမျိုးအတွက်ပါ လုံလုံလောက်လောက် ရှိတာတွေ့ရတယ်။
Car Body ကြံ့ခိုင်မူအပိုင်းမှာလည်း တော်တော်ကို မာကျောကျစ်လစ်တာ ခံစားရတော့ ဘယ်လိုလမ်းကို မောင်းမောင်း ပူစရာမလိုဘူး။
နောက်ဆုံးက Design ပိုင်း။ Sporty ဆန်တယ်။ မြင်တာနဲ့ ခပ်သွက်သွက်ပြေးမယ့် ကားမျိုးဆိုတာ တန်းပြီးပြောနိုင်တာမျိုးဆိုတော့
ကျနော်တို့ Redline Media အနေနဲ့ကတော့ MG HS 2020 ဟာ လူစိတ်ဝင်စားမှု တော်တော်လေးများတဲ့ကားတစီးပါ။ Sporty နဲ့ Luxury ဆန်မှုကို ရရှိနိုင်တဲ့ ကားတစီးပါလို့ သုံးသပ်ပေးရင်း အခု review လေးကို အဆုံးသတ်လိုက်ချင်ပါတယ်။
​ဒီ Brand New MG HS ကို စိတ်ဝင်စားလို့ အသေးစိပ် ဆက်သွယ်မေးမြန်း/ဝယ်ယူချင်တယ် / Test driving ပြုလုပ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့.....
MG Myanmar ရဲ့ Hotline No: ဖြစ်တဲ့ 09753347855 ဒါမှမဟုတ် MG Myanmar ရဲ့ MG Authorize Dealer hotline no: 09 4500 33363 တို့ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။